iPhone ပေါ်က WiFi နဲ့ပြproblemsနာရှိလား။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုကြိုးစားပါ အိုင်ဖုန်းသတင်း
ပါပလော Aparicio | | iOS 9
သင့်ရဲ့ iPhone က WiFi နဲ့ချိတ်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူး? operating system တစ်ခု၏ဗားရှင်းအသစ်ထွက်တိုင်းတိုင်းပြproblemsနာအသစ်များပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤပြproblemsနာများသည်များသောအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ အပူလွန်ကဲခြင်း (သို့) ဤဝင်ပေါက်အကြောင်းဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အချို့သုံးစွဲသူများကသင်ရှိသည်ဟုအစီရင်ခံကြသည် သင်၏ WiFi ကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်သောအခါပြနာများရှိသည်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာအစီအစဉ်အပေါ်အပျက်သဘောသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပြသပါလိမ့်မယ် အသုံးအများဆုံး iPhone ပြproblemsနာများ.
iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်ရှိပုံမှန် WiFi ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်သင်လိုချင်သည်။ ¿အကယ်၍ ၎င်းသည် WiFi ကွန်ယက်များကိုမတွေ့ပါကသို့မဟုတ်အဆက်ပြတ်နေလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ? နိမ့်အချက်ပြ? အောက်ပါဖြေရှင်းနည်းများကိုကြည့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၄ င်းတို့သည်သင့် iPhone ၏အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များ အသုံးပြု၍ ရသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
4 WiFi လက်ထောက်ကိုဖွင့် / ပိတ်ပါ
5 WiFi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်တည်နေရာဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ
6 iTunes ကိုအသုံးပြုပြီး restore ပြန်လုပ်ပါ
ပထမဆုံးကြိုးစားရမှာက WiFi ကို iPhone, iPod သို့မဟုတ် iPad မှချိတ်ဆက်ပြီးပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ (Control Center မှ) အနီးကပ်ဆုံးသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသက်သာဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီဟာကိုမပြင်ဘူးဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကို restart လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ router ကို restart လုပ်ပါ.
အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WiFi ကွန်ယက်ကိုမေ့သွားတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Settings / WiFi သို့သွားပြီး WiFi ကွန်ယက်ဘေးရှိ« i »ကိုနှိပ်ပြီး«ဒီကွန်ယက်ကိုမေ့လိုက်ပါ»ကိုနှိပ်ပါ။ တစ်ချိန်ကမေ့ပြီးသည်နှင့်ပြtheနာဖြေရှင်းပြီးပြီလားဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဆက်သွယ်သည်။
အထက်ပါပြtheနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Settings / General / Reset / သို့သွားပါ ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် WiFi ကွန်ယက်များအတွက်စကားဝှက်များအားလုံးကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာ၏ APN ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။
WiFi လက်ထောက်ကိုဖွင့် / ပိတ်ပါ
iOS9မှ iPhone, iPod သို့မဟုတ် iPad သည် WiFi ကဆက်သွယ်မှုကောင်းကောင်းမရလျှင်မိုဘိုင်းကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပျက်ကွက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများ၏ရင်းမြစ်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်၎င်းကိုဖွင့် / ပိတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်မည်။ WiFi assistant ကို activate / deactivate လုပ်ဖို့ Settings / Mobile data ကိုသွားပြီး WiFi အတွက် Assistance ကို activate / deactivate လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ပြtheနာဆက်ရှိနေသေးလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စမ်းသပ်စရာတစ်ခုကျန်သေးသည်။ ပိတ်ထားရန် တည်နေရာဝန်ဆောင်မှုများ WiFi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Settings / Privacy / Location / System service သို့သွားပြီး Wi-Fi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကိုရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်။
iTunes ကိုအသုံးပြုပြီး restore ပြန်လုပ်ပါ
ထို့အပြင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများသည်အလုပ်မဖြစ်ပါက software ပြissuesနာများကိုဖယ်ရှားရန် iTunes ဖြင့်သန့်ရှင်းသောပြန်လည်အသုံးပြုမှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
မင်းရဲ့ iPhone က WiFi နဲ့မဆက်သွယ်သေးဘူးလား။ ဒီလှည့်ကွက်တွေနဲ့ iPhone ဒါမှမဟုတ် iPad ကနေကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါပြyouနာတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS9» iPhone ပေါ်က WiFi နဲ့ပြproblemsနာရှိလား။ ဒီဖြေရှင်းချက်များကိုစမ်းကြည့်ပါ
101 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကျွန်ုပ်သည် iOS2beta 9.1 နှင့်အတူရှိနေပြီး iOS 9.0 နှင့် iOS 9.0.1 ရှိ wifi နှင့်ပြIနာအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ဟဲလို ios 9.1 beta version ကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမလဲ။ 9.0.1 သို့ update လုပ်ပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား wifi နှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်မပြုပါ
ကျွန်တော့်ရဲ့ပြသနာကကွန်ယက်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး modem ကနေဝေးသွားတဲ့အခါသူကဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားတယ်
iOS9တွင် twitter နှင့် facebook application များသည်အလွန်နှေးကွေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တက်သည်သို့မဟုတ်တက်သည်နှင့်အပလီကေးရှင်းများခုန်ချသည်။ ဒါဟာ iPhone6နှင့်အတူဤနောက်ကျကြုံတွေ့ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါတယ်
yep iPhone 9.0.1 သည်အလွန်နှေးကွေးနေဆဲဖြစ်ပြီး၊
အင်တာနက်ကနေအဆက်ဖြတ်ဖို့ပြောတယ်။ ငါ iOS 9.3 ကို update မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး
ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းပေါ်ရှိ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုနှေးကွေးသော်လည်းယနေ့တစ်ခေါက်မှနောက်တစ်ခုသို့ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုလိုတော့ပါ၊ စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီနှင့်ပင်ပြန်လည်ခွဲခွါခြင်းကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ , ငါ iPhone ကို mode ကို factory သို့ပြန်ထား၏။ သုည h မှ စ၍၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
IOS 9.2 ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို ၀ ိုင်ဖိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သည် (သို့) ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ အောက်ခြေမှအောက်သို့ရွေ့လျားနေစဉ်အနက်ရောင်စက်ဝိုင်းပါသောအိုင်ကွန်ကိုပြသည်။
ငါမိုဘိုင်းကို ishop တွင်ကြည့်ရှုရန်ယူသည် (၎င်းသည်မက္ကဆီကိုရှိပန်းသီး၏တရားဝင်ဖြန့်ချိသူဖြစ်သည်။ ) သူတို့သည်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး wifi သည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းပြသသည့်ပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည် (၎င်းကိုပန်းသီးဖြင့်ပြောပြသည်) ငါမကြောက်တော့ဘူးငါကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ငါမွမ်းမံလိုက်တာနဲ့သူတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ တစ်ခါတစ်လေမှာငါကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ WiFi ကွန်ယက်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အချိန်ယူရတယ်။ မိုဘိုင်းတွင်ကွန်ယက်ရှိပါသလား။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သည်) ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးသည့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာဒံသည်၎င်းကိုပြန်ယူရန်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၊ သင်၎င်းကို icloud မပြုလုပ်မီရှာဖွေခြင်းကိုပိတ်ထားပါ။ iTunes မှပြန်လည်မရယူမီနှင့်အရန်ကူးခြင်းမပြုမီ iphone အတွက်၎င်းကိုအသစ်တစ်ခုအဖြစ်ထားခဲ့ပါ။ ၎င်းကဲ့သို့သောနေ့တစ်နေ့အတွက်ကြိုးစားပြီးစစ်ဆေးပါက၊ သင်၏အဆက်အသွယ်များကို icloud မိတ္တူမှကူးယူနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကို iTunes မှပြန်ယူလျှင်မှားသွားနိုင်သည်။ (ဒါကအဓိကထောက်ခံမှုအကြံပေးပြောသောအရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်ede apple) သင်ဤနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကိုအမြဲတမ်းကြိုးစား။ မရပါ
ငါနဲ့အတူတူပါပဲ၊ သူတို့ပြောတာကအင်တာနာနဲ့ပြaနာဖြစ်တယ်၊ အဲဒီပြသနာတွေရှိနေလို့ဒီစနစ်ဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ပြောတယ်၊ အက်ပဲလ်ဟာ ၄ ထပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်သင့်တယ် ကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ပြောင်းလဲမှု။
Judit Olivera ဟုသူကပြောသည်
ဒါကငါ့ကိုအခုဖြစ်ပျက်နေတယ်။ ပြီးတော့ iPhone ကမကြာခဏပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်၊ မင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်တာလဲ။
Judit Olivera အားပြန်ပြောပါ
၉.၂ ကို iPhone update 9.2 ပြီးနောက် wifi icon မှောင်နေတဲ့မီးခိုးရောင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၀ င်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Wi-Fi signal ကိုကျွန်တော်မမြင်ပါ
HELLO JAVI အကယ်၍ သင်သည်ဤပြPROနာကိုပြင်နိုင်လျှင်သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။
ကျွန်ုပ်မှာလည်း iPhone ပြsနာမှာလည်းအဲဒီပြhaveနာရှိနေတယ်။ တစ်ချိန်ကမှ wifi ကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကို activate / deactivate လုပ်နိုင်သေးတယ်။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကငါ့အိမ်ကနေဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ် network မှမှကွန်ယက်တစ်ခုမတွေ့နိုင်ခြင်းပဲ ခြုံကြည့်ရသော်ကွန်ယက်ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးသောအခါ၊ ထိန်းချုပ်နေရာ၌ပြiနာပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ ဝိုင်ဖိုင်အိုင်ကွန်ကိုမီးခိုးရောင်စက်ဝိုင်းဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားမလုပ်နိုင်အောင်တားဆီးပေးသော configuration ရွေးချယ်စရာများတွင်ပင်ရှိသည်။ ဒါကိုလုပ်ပြီးမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ထားပြီးအရောင်ဖျော့အရောင်နဲ့အဲဒီအပိုင်းမှာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုပြသပါ။
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုမကြိုးစားလိုတော့ပါ။ ယခုတွင်၎င်းသည်ပြicianနာကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်၎င်းသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ပြaနာမဟုတ်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်နည်းပညာရှင်တစ်ယောက်သာသွားရန်လိုအပ်သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူ။
ငါနဲ့ထပ်တူထပ်တူထပ်မျှဖြေရှင်းလိုက်တယ်။ ငါ sim ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး sim မပါဘဲပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ အဲဒါကငါ့ကို wi-fi settings နဲ့ ၀ င်ပြီးပုံမှန်ဆက်သွယ်ပေးတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Dzzy ami tmb ကကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
ဟိုင်း MAX၊ iPhone6နဲ့လည်းအတူတူပဲ။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ အဖြေတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့လား
ကျွန်ုပ်၏ iphone တွင်နောက်ဆုံး update လုပ်ကတည်းက wi-fi connection သည်ကပ်ဆိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် signal ကိုလက်ခံရရှိရန် router မှ ၃ မီတာထက်မပိုသော !!!! ငါ 3m ထက်ပိုသောဝေးရွေ့လျှင်, ငါကဆုံးရှုံး !!!!
Alicia လည်းကျွန်ုပ်နှင့်ထပ်တူဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်အဖြေတစ်ခုရှာလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုအသိပေးပါ။
ငါနဲ့အတူတူပါပဲ၊ သူတို့ကအင်တာနာကိုပျက်စီးစေမယ်လို့ပြောတယ်။ သင်အဖြေရှာတွေ့လျှင်၎င်းကိုမျှဝေပါ၊
Guillermo မေပယ် ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ iPhone6ရှိတယ်။ အင်တာနက်အိုင်ကွန်ဆိုရင် tif စခန်းမရှိဘူး။ ငါဘယ်လိုပေါ်လာစေသလဲ ရယ်စရာ
Guillermo arce သို့ပြန်သွားပါ
nelber vega ဟုသူကပြောသည်
Guille နှင့်အခြားသူများမှာကျွန်ုပ်သည် router မှရွေ့လျားသောအခါအချက်ပြမှုပျောက်ဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်အန်တာနာကိုပြောင်းလဲရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တင်နာအသစ်တစ်ခု (iphone 5) ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်၊ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်နေရာတွင်အစားထိုးလိုက်သည်နှင့်ဖုန်းသည်ကျန်နေသေးသည်။ အတူတူပဲ၊ router ကနေထွက်ခွာတဲ့အခါအချက်ပြတယ်။ သူငယ်ချင်းများ၊ ပြproblemနာကအင်တာနာမဟုတ်ဘူး၊ ပြboardနာကအဓိကဘုတ်ရဲ့ဝိုင်ဖိုင်ချစ်ပ်မှာဖြစ်တယ် ။( အဲဒါကိုဒီပူပူနွေးနွေးချစ်ပ်ပေါ်တွင်ထိန်းချုပ်ထားသောအပူ (reflow) ကိုအသုံးချခြင်းဖြင့်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းမရှိဘဲဆက်သွယ်မှုကိုထပ်မံဆုံးရှုံးခြင်းမရှိပဲဖြေရှင်းနိုင်သည်… လူတိုင်းကံကောင်းပါစေ
nelber vega သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့မှာ IOS6နဲ့ 9.2 ပေါင်းထားတယ်။ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ အခြားဆဲလ်ဖုန်းတွေကလည်းတူညီတဲ့ကွန်ယက်မှာပျံတယ်။ ငါအရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးသည်။ တူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ အခြား calus အားလုံးက Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုရှာဖွေသောအခါ၊ ငါ့မှာမတွေ့ရပါ၊ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားရမည်။ ငါအရမ်းပူတယ် !!! ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၌ 3G သို့မဟုတ် LTE signal ကောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းသည် Wi-Fi ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပျံသန်းသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ !!
ကျွန်ုပ်မှာထပ်တူထပ်မျှပျင်းစရာကောင်းတဲ့ပြhaveနာလည်းရှိတယ်။ ငါ့အိမ်မှာအော်ပရေတာရဲ့အချက်ပြမှုကအရမ်းနည်းတယ်၊ ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် iOS9ကိုမွမ်းမံပြီးကတည်းက ... iPhone ကိုငါအရမ်းသဘောကျမိတယ် တိုးတက်အောင်လုပ်မယ့်အစား သူတို့ဟာဒီလိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ပြproblemsနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။ မကြာခင်မှာအဖြေတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်၊ ငါ android ကိုဝယ်နေတယ်။ IPHONE6plus အတွက် modem ကိုဆက်ထားဖို့လိုတယ်၊
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာထပ်တူပြproblemနာရှိနေတယ်၊ ​​ကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်သည် router မှတစ်မီတာကျော်ဝေးသောနေရာတွင်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ၊ နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်အချက်ပြမှုရရန်ဘေးတွင်ရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ သင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရင်ဒီပြmeနာကငါ့ကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်စေတယ်။
Carlos Manuel ဟုသူကပြောသည်
ငါ ios 9.3.1 ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီးယခုတွင်၎င်းသည်ဝိုင်ဖိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်သော်လည်းမသွားပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်တူညီသောအရာလော။
Carlos manuel အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၌ iPhone 6s Plus ပြproblemsနာရှိသည်။ ဝိုင်ဖိုင်ပေါ်လာပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်ကိုတောင်းသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထည့်လျှင်၎င်းသည်မမှန်ကန်သောစကားဝှက်ဖြစ်သည်။ အခြားကွန်ပျူတာများကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပြီ၊ စကားဝှက်မှာကောင်းမွန်ပြီးပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ - ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ စကားဝှက်မှားနေတာပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုမသိသည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်သမျှအားလုံးကိုကျွန်ုပ်လုပ်ပြီးသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ
ယနေ့ငါသူငယ်ချင်းအတိအကျဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ရဲ့ iPhone update ကို update လုပ်ဖို့ပြောတယ်။ Wifi တစ်ခါတစ်လေကျတယ်။ ဆိုလိုတာကအချက်ပြနေတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကပို့တာမဟုတ်ဘူး။ data တွေတစ်ခါတလေထက်ပိုပြီးမရဘူး။
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်တွင် 6GB iPhone 64S Plus ရှိသည်၊ မနေ့ကကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့ပြီးပြproblemနာတစ်ခုတည်းမှာ - မှားယွင်းသောစကားဝှက်ဖြစ်သည်။ သင်အဖြေတစ်ခုကိုရှာတွေ့သလား။
IOS 9.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တာနဲ့တူညီတဲ့ပြproblemနာရှိနေတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆဲလ်ဖုန်းအပူလွန်ကဲခြင်းနှင့်မကောင်းတဲ့ဝိုင်ဖိုင်တို့ငါ့ဆဲလ်ဖုန်းပျက်စီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အခုဆိုရင် Android ဟာ iOS နဲ့တိုင်းတာတဲ့အပြင်ပိုပြီးသက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တိုင်းတာနေပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့်၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်တာရှည်ခံမှုကိုအစဉ်အမြဲရွေးချယ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ဤဖုန်းများသည်နေ့စဉ်စျေးကြီးလာပြီးသုံးစွဲသူများအတွက်အရည်အသွေးနှင့်အဆင်ပြေမှုလျော့နည်းသွားသည်။ သူတို့ဟာကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လာကြပြီးဘာမှမဖြစ်လာကြဘူး။
ငါ့အတွက်၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံ wifi (ios 9.2.1) နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ionn 9.2 ထက် ios နည်းပါးသည်။
ငါကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန် router ကိုအလွန်နီးကပ်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်! ဤပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်၏ megabytes အားလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ ငါသူတို့ကြိုးစားသမျှကိုကြိုးစားဘာမျှမကြိုးစားခဲ့သည်။
ငါ ၅ မိနစ်တိုင်းမှာအင်တာနက်ပေါ်မှာရှိရမယ်၊ အိုင်ဖုန်းတွေနဲ့အတူနေဖို့လိုတယ်၊
၅ မိနစ်တိုင်းကျွန်တော်ဟာ network ကိုချိတ်ဆက်နေရမယ်၊ အိုင်ဖုန်းတွေနဲ့အတူလိုက်ဖက်တယ်
မင်္ဂလာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က iOS 9.2.1 ကို update လုပ်ပေးပါ။ နှင့်ဝိုင်ဖိုင်အိုင်ကွန်သည်မီးခိုးရောင် ဖြစ်၍ ၎င်းကိုမဖွင့်ပါ။
hello ginnette စိတ်မကောင်းပါ။ ပြproblemနာကို wifi icon ဖြင့်မီးခိုးရောင်ဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သလားသို့မဟုတ်အတူတူပင်လား။ ကျွန်ုပ်တွင် ios4ပါသော iphone 9.2.1s ရှိပြီးကျွန်ုပ်တွင်လည်းအလားတူပြproblemနာရှိသည်။
Loyal Memo သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ။ iOS 9.2.1 ကိုမကြာသေးမီက update လုပ်ခြင်းနှင့်အတူပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ပန်းသီးများတွင်မိခင်မရှိခြင်းသည်အမှန်တရားကိုဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်အထိနောက်ဆက်တွဲ update အတွက်ဖြစ်သည်။
Juan Camilo Aguirre ဟုသူကပြောသည်
ahh လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာအထိကျွန်ုပ်သည်အားနည်းနေသော Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုစတင်မြင်တွေ့ရပြီးကျွန်ုပ်ဖြစ်သင့်သည်
အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားလို့ငါ့မှာဗားရှင်း ၉.၂ ရှိတယ်။ ငါ့ရဲ့ဝိုင်ဖိုင်ပျက်စီးသွားပြီလားဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုရှိပြီလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့စာတွေဖတ်တဲ့အခါငါလိုပဲငါ့လိုပြproblemsနာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။
Juan Camilo Aguirre ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ iphone6ရှိတယ်။ Wi-Fi ကိုမချိတ်ဘူး။ ထိုအခါငါအောက်ပါနှင့်အတူစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုရ။ REG-RESP V ကို = 3; r = 1911692942; n = + 51942899868; s = 0256B2AC6EFFFFFFFF18D7C755DC4666E840B3E908770F9F631481CFC9
ပြီးခဲ့သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုစမ်းသပ်ပြီးထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်မပါဘဲ၊ ကျွန်ုပ်အမှု၌ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်စွမ်းအင်နိမ့် mode ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပေးသည်။ သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဒါဟာငါနဲ့ချိတ်ဆက်ပေမယ့်သွားလာမကြောင်းငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်။ ကွန်ရက်ကိုသွားဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ဒီကွန်ရက်ကိုမေ့လိုက်တယ်၊ နောက်တစ်ခါပြန်ဆက်ပြီး၊ Proxy ကို Automatic mode သို့လွှဲပြီး Renew Lease ကိုပြောလိုက်တယ်။ တစ်ခုတည်းသောအရာကသင် network မှအဆက်ဖြတ်လိုက်သောအခါ (သို့) အကွာအဝေးကြောင့်အချက်ပြမှုပျောက်သွားသည့်အခါတိုင်း၊
ဒီနည်းကိုလုပ်ရင်ဒီနည်းကဖြေရှင်းနည်းပါ။ ငါအရမ်းပျော်တယ်, သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါက fix ။ ယောက်ျားတွေ HAGANLOOO OMG
Corriendito ယခုငါ wifi microchip ကိုရုရှားသင်ခန်းစာပါသောရာပေါင်းများစွာသော leuros ၏မိုဘိုင်းလ်သို့ပြောင်းပြီးကျွန်ုပ်၏ယခင် iPhone ကိုမည်သို့မည်ပုံမစဉ်းစားခဲ့သနည်း။
ကျွန်ုပ်၏ IPHONE6တွင်အိမ်၌3MB အမြန်နှုန်းရှိသောကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် WIFI ရှိခြင်းကြောင့်နှေးကွေးလွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် YOUTUBE သို့ပင်မဝင်ရောက်နိူင်ပါ။ 3G ဒေတာကို အသုံးပြု၍ ကွဲပြားခြားနားပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone မှာလေယာဉ်ပျံဖြစ်လာပြီးကုန်ကျငွေမှာမြင့်မားပါသည်။
ငါလုပ်ခဲ့တာက Laplink ROUTER ကို configure လုပ်ဖို့အလိုအလျောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ channel ကို 1 ပြောင်းဖို့သွားတာပါ။ ဒါဆို iPhone WIFI နဲ့ပျံသန်းနေပြီ။
ကျွန်ုပ်သည်အခြား WIFI နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှင့်သာမလုပ်ခဲ့ပါ။
ကောင်းတယ် iPhone 6+, ၉.၂.၁ ။ ကျွန်တော့်အတွက် wifi assistant ကိုလုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
မည်သည့် Wi-Fi ကွန်ယက် (အခြားဖုန်းမှဝိုင်ဖိုင်မျှဝေသည်) ကိုဆက်သွယ်သောအခါ၊ မှားယွင်းသောစကားဝှက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုအမှားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်လိုသော Wi-Fi ကွန်ယက်အားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသည်။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်လျှင်, ငါကငါ့ကိုပြappreciateနာများစွာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါငါဒေတာတွေအများကြီးဖြုန်းနေသောကြောင့်, ငါတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
9.2.1 ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်ပါ။ sim ကားသည်ကျွန်ုပ်ကိုမဖတ်ရပါ။ ဝိုင်ဖိုင်မပေါ်လာပါ။ ကျွန်ုပ်က modem ကိုဘေးတွင်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်စကားဝှက်ထည့်ထားပါကမှန်ကန်ကြောင်းမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone6ကို ios 9.2.1 သို့အမှား ၅၃ အတွက် update လုပ်ပါ။ အိုင်ကွန်သည်အလွန်ဖျော့ဖျော့အရောင်ဖြင့်မြင်တွေ့ရပြီး၎င်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်နှင့်တူညီပြီးနာရီပေါင်းများစွာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ခေတ်သစ်သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်နှင့်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီး၎င်းသည်မှော်အတတ်ဖြင့်ခန့်မှန်းပုံရသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် router သည် configuration ကိုပြင်လိုက်သည်၊ အပြောင်းအလဲများကိုကယ်တင်ရန်မမေ့လျော့ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ချီလီမှကြိုဆိုပါတယ်
reset ကွန်ယက်ဆက်တင်ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြsolutionနာအတွက်ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုတင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Iphone 4s ရှိပြီးကျွန်ုပ်မှာ wifi နဲ့အတူတူပဲ။ ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါကအိုင်ကွန်သည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်နေပြီးအထက်ပါရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါ။ youtube သင်ခန်းစာတွင်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာအပူကိုအပူပေးပြီး iPhone ကိုအပူ ပေး၍ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ပြတ်တောက်သည်နှင့်၎င်းကိုပြန်လည်စတင်။ ပြန်လည်စတင်ရန်စောင့်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်စတင်သည်၊ wifi ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးပြproblemsနာမရှိဘဲ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဤဖြေရှင်းချက်သည်ခဏသာဖြစ်ပြီး Wi-Fi အိုင်ကွန်သည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်လာသည်နှင့်သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြန်လုပ်ရမည်။ ဒီပြproblemနာကဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ ပန်းသီးကတော့အဖြေမပေးသေးပါဘူး။ မင်းအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပန်းသီးကဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone5ကို iOS 9.3 final သို့ beta ရှိခြင်းကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်မှအဆက်ဖြတ်ရန်ပြောသောအမှားတစ်ခုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ခြေလှမ်းများကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတူညီသောအရာကိုလည်းပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone အသစ် 6s Plus အားလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး Wi-Fi အချက်ပြမှုမှန်ပါသည်။ သို့သော်စာမျက်နှာများကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်ပြီးအခြားအချက်ပြခြင်းမရှိဘဲရပ်ထားသည်၊ လျှောက်လွှာအချို့ဖွင့်ပြီးအခြားဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ကန်တော့ချွန်ကိုရရှိသည်။ ငါလုပ်ပေးတာကအဆုံးကပြaနာတစ်ခုလား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါဟာ ၉.၃.၁ ထည့်သွင်းထားသည့်မွမ်းမံချက်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့မှာ iOS6နှင့်အတူ iphone 6.3.1 plus ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဝိုင်ဖိုင်အချက်ပြမရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အရေးတကြီးဖြေရှင်းချက်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးပြီ။ ၀ မှပြန်မရပါ။ ကွန်ယက်တစ်ခုမျှပေါ်လာမည်မဟုတ်။
ခင်ဗျားရဲ့ကူညီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ပတ်ရစ် iPhone6ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီးအားကစားရုံထဲမှာကွန်ယက်တစ်ခုရှာလို့မရဘူး။ ပြီးတော့ဝိုင်ဖိုင်ကနှေးနေတယ်။ မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကြောင့်ငါပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ ..
Rafa porter အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်တွင် iphone6၏ဝိုင်ဖိုင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် iPhone ကိုမွမ်းမံခြင်းမတိုင်မီအထိကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်ပတ်တွင်ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်မကောင်းတော့သဖြင့်ယနေ့အထိကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးမပြုတော့ပါ။
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီချိတ်ဆက်မှုကအလုပ်မလုပ်သော်လည်း၊ အခြားမည်သည့်ကွန်ယက်ကိုမှငါမရှာနိုင်သော်လည်း၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်လျှင်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
ငါ့မှာ iphone6ရှိတယ်၊ wifi signal ကအရမ်းဆိုးတယ်။ ၃ မီတာအကွာအဝေးတွင်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းမှအချက်ပြမှုကိုသတိမပြုမိပါကအချက်ပြမှုရရှိရန်ကျွန်ုပ်သည် router နှင့်ချိတ်ဆက်ရမည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒီအဖြေကိုရရှိလျှင်၊ မှတ်ချက်ပေးပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာအတူတူပင်ပြproblemနာရှိနေပါသည်။ အဲဒါကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလား။
မင်္ဂလာပါ Yolanda၊ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဆီကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်၊ သူတို့ကျွန်တော့်ရဲ့ signal အင်တာနာကိုပြောင်းလိုက်တယ်၊ ၄ င်းကို router နဲ့တွဲထားရမယ်၊ Bluetooth၊ My 3G နဲ့ 4G ဒေတာတွေကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ၄၅ ဒေါ်လာကျတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့် wifi / bluetooth ကအင်တာနာပဲ။
ငါ Omar အတူတူပင်ပြproblemနာရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ယောက်ယောက်ကူညီပေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည် router ၏မီတာဝက်အတွင်း၌သာကပ်ထားပါကကျွန်ုပ်တွင် Wi-Fi ရှိသည်။ ငါ့ဒေတာပျံ !! ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
တစ်စုံတစ်ယောက်မှကျပန်း wifi ဆက်သွယ်မှုရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်တွင် iPhone 6၊ WiFi မီးခိုးရောင်၊ Blutooth မစတင်ပါ၊ ဆက်ပြီးလည်နေပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးပြန်လည်ထားရှိမည်၊ ရေခဲသေတ္တာထားပါ၊ ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်ထားရှိမည်၊ ဘာမှမ
ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား၊ ပိုကောင်းတယ် xambia r WiFi အင်တာနာဟုတ်လားဆိုတာကိုလူတိုင်းသိတယ်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်တစ်ထောင်အပူရှိပြီး ufffff ကိုထုတ်ပေးသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဂျော့ခ်ျကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ ဒါဟာငါ3days ago ဒါကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလား ???
ကျွန်ုပ်သည်စက်ဝိုင်း၏ပြdamနာနှင့်ထပ်တူဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်ပြီးပါပြီ၊ ဘာမျှမလုပ်ပါ
ဒါကိုမွမ်းမံပြီးပြီလား 9.3.2 ထွက်သည်
ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်မိုင်းတွင်း WiFi ကိုပိတ်ထားသည်။ အခြားဆဲလ်ဖုန်းတစ်ခုဘာမှမဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုချိတ်ဆက်သောအခါလူတိုင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ wifi icon ပိတ်ခြင်းပြhaveနာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် 4s IOS 9.2.1၊ ဖြေရှင်းချက်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ကွန်ပျူတာကို update လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားသူများ၏စာမူများတွင်ဖတ်ပါ။ 4s ဖြစ်သည့်အတွက် update လုပ်ရန်အကြံပြုခြင်းမရှိပါက ၄ င်းသည်အချို့ function များဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကရှာလျှင်သူတို့အဖြေတစ်ခုမျှဝေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် မင်္ဂလာပါ။
ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးအခြေအနေအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဝိုင်ဖိုင်ကိုအသက်မရှင်တော့ပါ၊ iOS ကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ။ ယခုအချိန်တွင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဝိုင်ဖိုင်နှင့်အချက်အလက်များကိုသာကျွန်ုပ်လုပ်သောဒေတာများနှင့်သာ ဆက်သွယ်၍ မရပါ။ ငါ fix နိုင်တူသောလက်စသတ်
ကွန်ယက်တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးမှန်ကန်သောလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုထည့်တိုင်းအကူအညီကို ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ စကားဝှက်သည်မမှန်ကန်ကြောင်းဖော်ပြပေးသည်။ ဖြေရှင်းနည်းရှိပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ 🙁
ငါ့မှာ iPhone6ရှိတယ်၊ wifi ကိုမသုံးချင်ဘူး၊ Grey ပဲ၊ ငါငါ့နိုင်ငံ၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ iizone စတိုးကိုတလခွဲလောက်အကြာမှာသူတို့မှာသူတို့မှာအဖြေမရှိဘူးလို့ပြောတယ် iPhone မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြေမရှိဘူး၊ ဆဲလ်ဖုန်းကအာမခံချက်မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအစီအစဉ်အတွက်ပေးဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။
Mauricio Ruiz ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် IPHONE6iOS 9.3.2 ရှိပြီး router ဘေးတွင်မရှိလျှင် Wifi အချက်ပြမှုများမရှိပါ။ ငါအထက်တွင်ဖော်ပြထားသော setting ကိုအားလုံးကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်တူညီတဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။
Mauricio Ruiz ကိုပြန်ပြောပါ
Hello Mauritius၊ ခင်ဗျားလည်းအဲဒီလိုဖြစ်သွားတယ်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က Wi-Fi ကငါ့ကို router ဘေးမှာထားမထားရင်ငါ့ရည်းစားက iOS6တူတူအခြား iphone 9.3.2 လည်းရှိတယ်။ သူကသူ့ကိုမကြာခဏတွေ့တယ်။ သူက wifis ၁၀ ခုရှာတယ်။ ငါရှာမတွေ့ဘူး။ သူတို့ကအဖြေတစ်ခုရှာမယ်၊ ငါ့ကိုသိရင်ငါက ios ကလားဒါမှမဟုတ် wifi အင်တာနာမှာပြaနာရှိလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ 5s ရှိသည်။ wifi သည် iOS 9.3.2 နှင့်အလွန်အလုပ်လုပ်သော်လည်း Bluetooth သည်မည်သည့်စက်ကိုမှရှာ။ မရ၊
ကျွန်ုပ်တို့၌ iPhone6လုံး၊ ၆ လုံး ၂ လုံး၊ ၆ ၆ လုံး၊ ၁ ၆၊ ၅ ၅ နှင့် ၅ စီအားလုံးမွမ်းမံနေစဉ် wifi ပျက်သွားသည်၊ ဆက်သွယ်မှုမရှိ၊ ပိတ်ခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းအသစ်နှစ်ခုအတွက်အက်ပဲလ်အိုင်ဖုန်းနှစ်လုံးကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။ အတူတူပါပဲ၊ ငါ Apple ကိုသတင်းပို့ခဲ့ပေမဲ့အဖြေမရသေးဘူး။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေ၊ ဒီ iphone ဟာ poop ဖြစ်လာပြီ၊ ငါ့ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်။
hello jose ကျွန်ုပ်တွင် iPhone6Plus ရှိကတည်းကကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအတွက်အဖြေတစ်ခုရှာနေသည်မှာမည်မျှကောင်းသည်၊ ios 9.3.2 သို့ update လုပ်သောအခါပြwhenနာပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို Wi-Fi နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အက်ပ်များကိုမွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကိုမဆို download ပြုလုပ်၍ မရပါ။ အခုငါ့ရဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေပျက်နေပြီ။ iOS 9.3.3 ကိုလွှင့်တင်လိုက်ရင်ပြsolနာဆက်ရှိနေသေးရင် ငါသူတို့အများဆုံးချန်နယ်အတွက်ပြောသမျှအရာအားလုံးကြိုးစားခဲ့ .. , ။ ၎င်းကိုပြန်ယူပါ။ ငါ vpn ကိုသုံးလျှင်ပြtheနာပြန်ပေါ်လာသည်နှင့်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ , ။ , ။ ပန်းသီးမချို့တဲ့ခြင်းကားအဘယ်နည်း။
ဤ post ရှိမှတ်ချက်များအားလုံးကိုဖတ်သည့်အခါ wifi ပျက်ကွက်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်မှာ Configuration settings, iOS version ပြproblemsနာများနှင့် wi fi အင်တင်နာနှင့်ဆက်စပ်သော Hardware ပြproblemsနာများရှိသည်။
David ortega ဟုသူကပြောသည်
မိတ်ဆွေကောင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစု၌ဤအမှားရှိပါကကျွန်ုပ်၌ iPhone5ရှိပြီး၎င်းသည် Wi-Fi အချက်ပြမှုများစွာကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်အချက်ပြမှုနည်းသည်။ ကျွန်ုပ်အားအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းမှုတစ်ခုခုဖြင့်ကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် Wi လိုအပ်သည် -Fi ကျွန်ုပ်တစ်နေ့လုံး router ဘေးတွင်မရှိနိုင်ပါ။ ::
David Ortega အားပြန်ပြောပါ
ဟူဂို - @ ဟုသူကပြောသည်
ငါအရာအားလုံးကိုတကယ်ကြိုးစားပြီး၊ ၎င်းသည်ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်သော်လည်းအဆင်မပြေပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းကိုစက်ရုံအနေဖြင့်ပြန်လည်ထားရှိခဲ့သည်၊ ကွန်ယက်ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်ယူခဲ့သည်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတိယ iphone ပါ။ အရင်ဖုန်းက 5S ပါ။ တစ်ရက်ကနေနောက်တစ်နေ့အထိ Wifi ကိုဆက်မဆက်သွယ်တော့ပါ။ အနည်းဆုံး ၆S ဆက်သွယ်မှုရှိပေမယ့်လမ်းကြောင်းရှာမထားပါဘူး။ ငါမှာပန်းသီးရှိတယ်ဆိုတာမုန်းတယ်။
hugo သို့ပြန်သွားရန်: @
ကျွန်တော့်ဇနီးကသူမရဲ့ iphone ကို update လုပ်ပြီးသူမကဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပြhasနာတွေရှိတယ်။ ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ နေ့တိုင်းငါဖြည့်စွက်ပေးဖို့တောင်းပန်နေတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ငယ်ကိုဖြုန်းတီးလိုက်ရုံနဲ့ပြsufferနာတွေခံစားနေရတာထက်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ပိုကောင်းတယ်။
အရေးကြီးချက် - ကျွန်ုပ်သည်ဤပြproblemsနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားနေသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အနည်းဆုံးအမှု၌ဘာအလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ modem ကိုပြန်လည်စတင်ပါ၊ ပိတ်ပါ၊ ဖွင့်ပါသို့မဟုတ်ကေဘယ်လ်ကြိုးများကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်က၎င်းကိုအထွတ်အထိပ်အချိန်များတွင်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ အမှန်တရားမှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ ယခင်ကကျွန်ုပ်သည် wifi ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်းမသွားခဲ့ပါ။ ငါသိတဲ့အတိုင်း hertz or hertz (GHz ဟာပုံမှန် wifi ကွန်ယက်၏ပုံမှန်အကြိမ်ရေ) တွင်အလုပ်လုပ်သော wifi ကြိမ်နှုန်းများရှိသည်ကိုနားလည်သည်။ သို့သော် 5G နှင့် 2.5GHz တို့၏ကြိမ်နှုန်းသည်ပထမ 5GHz ဖြစ်သည်။ တိုတောင်းသောအကွာအဝေးများအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီးများစွာသော devices များထောက်ခံပါဘူး။ သင်၌ရှိသောဆက်သွယ်မှုများကိုစဉ်းစားပြီး modem ကိုပြန်လည်စတင်ပါ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
အာ ငါမေ့သည်မှာဤသည်သည်မှားယွင်းသောနည်းဖြင့်စုံစမ်းခြင်းဖြစ်သည်၊ နေ့ရက်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောအလုပ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်စမ်းသပ်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ငါပြthatနာဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ အိုင်ဖုန်းကငါနားမလည်သေးတဲ့ကြိမ်နှုန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးကရှိတယ်။
စူပါကောင်းသောအကြံဥာဏ်။ WiFi Assistant ကို Disable လုပ်တာကကျွန်တော့်အတွက်အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!! ငါ့ iPad ကိုဒေါသမထွက်စေနဲ့
ငါ့မှာ iPhone6ရှိတယ်၊ chip ပြောင်းပြီး wifi အလုပ်ကိုရပ်လိုက်တယ်။ 🙁ငါက iTunes ကနေပြန်လာပြီ။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်သူလည်းအတူတူပဲ။ ကျွန်ုပ်သည် IOS ဗားရှင်း ၉.၃.၅ တွင်ယခုရောက်နေပါပြီ။ ဒီပြproblemနာမှာဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
iOS 10 ကို iPhone 6s Plus ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးတဲ့နောက် wifi မီးခိုးရောင်ပေါ်လာတာကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်ခဲ့တာလား၊ တခြားတစ်ယောက်ယောက်လား။ ဖြေရှင်းချက်ကိုသင်သိပါသလား။
မင်္ဂလာပါ Edgar၊ နှစ်ရက်အကြာ ios 10 သို့ update လုပ်ပြီး ၃ ရက်အကြာတွင် wifi ဆက်သွယ်မှုသိပ်မရှိပါက signal သည်ချိတ်ဆက်သောအခါမည်မျှနီးကပ်သည်ဖြစ်စေအလွန်အားနည်းနေပြီးလွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်က screen ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရသည်။ router နဲ့ဒီ post ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဖြေရှင်းချက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ စက်ရုံကနေပြန်မရခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပျက်ကွက်နေဆဲဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲသောအခါ antenna ဟုတ်မဟုတ်သိရန်၎င်းကိုယူတော့မည်။ သို့သော်၎င်းသည် IOS အမှားဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါရေးတဲ့အဖြေကိုရရင်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
Palma နဲ့တူတူပဲ၊ ငါမှာ iPhone6ရှိတယ်၊ သူတို့ကမျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ဝိုင်ဖိုင်ကငါကိုမဖမ်းနိုင်ဘူး။ ငါက router နဲ့ကပ်ထားရလိမ့်မယ်။ ငါသည်သင်တို့၏မှတ်ချက်တန်ဖိုးထားပြproblemနာ။
Wave !! လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၌အလားတူပြproblemနာရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စက်ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်က၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အက်ပဲလ်သို့ယူဆောင်လာသည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသစ်တစ်ခုပေးခဲ့သည်၊ အဲဒီအပေါ်ကကျွန်တော့်မှာမျက်နှာပြင်ပျက်နေပြီးငါ့ကိုဘာမှမပေးခိုင်းဘူး။ ကံကောင်းပါစေ
Rodrigo Jaimes ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနံနက်၊ ငါ့နှမ iphone6မှာပြproblemနာရှိနေတယ်၊ ​​wifi အပြင် gps နဲ့ mobile data ပျက်သွားတယ်၊ ဒီပြforနာအတွက်ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
Rodrigo Jaimes အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ iTunes backup သည်ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သော IOS version 10.3.2 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Wi-Fi နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသောပြသနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုဖြေရှင်း။ မရပါ။ Slds ။ !
Apple သည်ဤပြFORနာအတွက်တာ ၀ န်ယူမှုနှင့် ၀ ယ်ယူသူများကို SOLUTIONS ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်၌ WIFI ဆက်သွယ်မှုပြOနာကိုနှောင့်နှေးစေသည့်အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အာမခံချက်မရှိပါကအထက်ဖော်ပြပါတာဝန်ခံသည်ဖယ်ရှားခြင်းခံရသည်။ ဖုန်းကိုပြန်လည်အသုံးချခြင်း၊ အချိန်ပျောက်ခြင်း၊ အသိပေးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဖြေ။
FANGORIA ဆိုသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်မည်သည့် Apple မျှထပ်မံမလိုချင်ပါ။
ဒါပေမယ့်လူတွေကအရမ်းမိုက်မဲပြီးမသိနားမလည်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအေးဆေးအေးဆေး (သို့) ငွေအမြောက်အများရှိလို့သူတို့ကို ၀ ယ်ကြတယ်။
ငါသုံးလိုက်ပြီ၊ ဒါကလုပ်နေတာ၊ Android နဲ့ငါကပ်နေတယ် !!!!
ကျွန်တော့်အတွက်ဘာအလုပ်မှမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒီနေ့မိုဘိုင်းဖုန်းမှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပုံရတယ်။ : /
ငါသည်ငါ့အိုင်ဖုန်း SE ပြBနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်